Kuxoshwe abafundi nge-Fade | News24
Kuxoshwe abafundi nge-Fade
PHOTO: Nokuthula Khanyile Abafundi base Siyahlomula Secondary School e-Ashdown abathi baxoshwe esikoleni ngoba begunde iFade.
BAYIQALE kabi ithemu yabo entsha abafundi bamatikuletsheni base Siyahlomula Secondary School e-Ashdown abakhonjwe indlela befika esikoleni ngoMsombuluko ngoba begunde isitayela sesimanje manje esaziwa ngele-Fade.
Labafundi abayisithupha bathi uthishanhloko wakulesikole ubaxoshile wathi kufanele babuye sebegunde izimbungculu. Omunye walabafundi abathe bayanqaba ukugunda izinwele zabo uthe okubaphatha kabi kakhulu ukuthi bakhona nabanye abafundi ngaphakathi esikoleni abagunde iFade abenza amakilasi aphansi.
“Bagcwele abafundi abagunde ngalendlela kodwa yena uvele wakhetha iphela emasini waxosha thina sodwa. Uma simbuza ukuthi ikuphi okungalungile ngendlela esigunde ngayo wasitshela ukuthi inqubomgomo yesikole ayivumi ukuthi abafundi bagunde kanje. Uma sithi akasitshengise leyonqubomgomo uvele wavuka ngolaka wasixosha. Uma kunenqubomgomo bekufanele bonke abagunde njengathi nabo baxoshwe.”
Labafundi bathi kumanje isikole siphezu kohlelo lokubhalisa abafundi bakamatikuletsheni ukuze babhale izivivinyo zabo zokuphela konyaka.
“Thina asibhalisile njengoba sihleli lapha emgaqweni, okusho ukuthi uma siqhubeka sinqaba ukugunda angeke size sizibhale izivivinyo zethu zokuphela konyaka nokuyinto ethikameza ilungelo lethu lokufunda,” kusho omunye umfundi.
Labafundi bakhale ngokuthi izihluthu zabo azikaze zibe yinkinga, kepha uthisha wabo onenkinga nezinwele zabo esikoleni. “Usitshele ukuthi uma singagundi singalokothi silubeke esikoleni, akazange asibuze noma sinayo yini imali yokugunda njengoba nenyanga ingakapheli. Asinayo imali yokugunda futhi asizimisele nje ngokugunda ngoba izinwele azinawo umthelela ngendlela esiphasa ngayo esikoleni.”
Labafundi bathe okuxaka kakhulu ukuthi abafundi besimame bona bayavunyelwa benze izitayela ezinhlobonhlobo emakhanda kodwa bona kuthiwa abagunde. “Benza izitayela ezahlukahlukene baze basisithe singaboni nasebhodini, thina izihluthu zethu zikanyiwe futhi zihlanzekile kodwa kuthiwa asigunde,” kusho omunye umfundi.
Lesitayela esithandwa ilabafundi kangaka sidunyiswe osaziwayo baphesheya kwezilwandle abafana no Chris Brown, Kendric Lamar, Usher kanye no Migeul.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo esifundazweni uKwazi Mthethwa usigxekile lesenzo wathi siphazamisa ilungelo labafundi lokufunda. “Besingakayitholi imibiko mayelana nalesigameko kodwa sizokwenza isiqiniseko sokuthi ihhovisi lesifunda liyazilandelela lenzinsolo zokumiswa kwalabafundi ngenxa yokuthi abafuni ukugunda.”
UMthethwa uthe labafundi banelungelo lokuthi banikwe ithuba lokubhalisa ukuze babe yingxenye yezivivinyo zokuphela konyaka.